Calaamadaha Uurka ee Toddobaadka, Xisaabinta Uurka, Fiidiyowyada
2 Usbuucyada Uurka
8 Usbuucyada Uurka
12 Usbuucyada Uurka
16 Usbuucyada Uurka
Uurka Q iyo A
Calaamadaha Uurka ee Usbalka Toddobaadka
Xisaabiyaha Uurka iyo Fiidiyowyada Uurka
Ku soo dhawow aduunka caloosha! Waxaan dhihi karnaa dhoola cadeyn maxaa yeelay waa mid ka mid ah waxyaala badan oo aad u isticmaali doonto inta lagu jiro muddada uurkaaga asbuucii. Uurka wuxuu noqon karaa waqtiga ugu xiisaha badan nolosha haweeneyda, laakiin sidoo kale waxay ka buuxsameysaa su'aalo iyo walaac. Marka uur yeelato, waxaa laga yaabaa inaadan ogeyn waxa la filaayo usbuuc kasta oo aad ogaatid astaamaha uurka toddobaadkii. Waan caawin karnaa.
Waayo, kuwa ku fikiraya taariikhdaada la filayo, waxaan ku siinaynaa a xisaabiyaha toddobaadka ee uurka leh taariikhda la filayo, kaas oo ka caawiya wax badan. Waxaan sidoo kale bixinnaa tilmaam ku saabsan sida loo xisaabiyo taariikhdaada lagaa rabo. Marar badan dib u hubi si aad ugu ogaadaan calaamadaha uurkaaga asbuucii. Booqo Q iyo Qaybkayaga si aad u weydiiso su'aal iyo akhri jawaabaha. Naga ilaali wareega intaad ku jirto usbuuca uurkaaga asbuucii. Ma haysataa calaamado caadi ah, aan caadi ahayn? Sabab kasta oo aad ka welwelsan tahay uurkaaga cusub? Annagu ma naqaan Dr laakiin macluumaadkaagu way ku caawin karaan. Waxaanu kaa caawin karnaa in la go'aamiyo haddii calaamadaha uurkaaga toddobaadkii asbuucii ay caadi yihiin inta lagu jiro xilliga uurkaaga. Mar labaad, way ka fiican tahay markaad ogaato waxaad filayso toddobaad kasta. Waxaan usbuuc usbuuc ku bixinnaa macluumaadka wiigga, laga bilaabo asbuucyada astaamaha 1. Maxay yihiin calaamadaha uurka toddobaadkii 2, toddobaadkii 5, iwm. Waxaa jira toddobaadkii toddobaadkii ee xisaabinta uurka, iyo jadwalka si loo ilaaliyo jirkaaga iyo canuggaaga iyada oo loo marayo arrintan
Taxanaha Calaamadaha Uurka
Toddobaad 1 -Toddobaad 2 -Toddobaad 3 – Toddobaad 4 -Toddobaad 5 – Toddobaad 6 – Toddobaad 7-Toddobaad 8 -Toddobaad 9 – Toddobaad 10 – Toddobaad 11 -Toddobaad 12 – Toddobaad 13 – Toddobaad 14 – Toddobaad 15 -Toddobaad 16 – Toddobaad 17 – Toddobaad 18 -Toddobaad 19 -Toddobaad 20 – Toddobaad 21 – Toddobaad 22 -Toddobaad 23 – Toddobaad 24 – Toddobaad 25 Toddobaad 26 -Toddobaad 27 – Toddobaad 28 – Toddobaad 29 – Toddobaad 30 – Toddobaad 31 -Toddobaad 32 – Toddobaad 33 – Toddobaad 34 – Toddobaad 35 -Toddobaad 36 – Toddobaad 37 - Toddobaad 38 – Toddobaad 39 – Toddobaad 40
Halka aan awoodno, waxaan bixinaa haboon fiidiyoowga uurka sidoo kale. Waxaa ugu horeyn diiradda saarnaa xogta la xiriirta caafimaadka iyo bixinta talooyin ku saabsan uurqaadida iyo talada inta lagu jiro muddada uurkaaga asbuuca asbuuca, sida fiidiyaha kor ku xusan. Waxaa laguu keenay adiga Adeegyada Caafimaadka Macaamiisha. Waxaanu sii ballaarineynaa, laakiin fiidiyoogu wuxuu sii wadi doonaa bogga hoos ku xusan oo laga wada xayeysiiyo soo iibinta ilmaha. Waxaan si joogto ah uga dhajin karnaa jadwalka ku saabsan wax soo iibsiga dhalaanka, diiwaanka hadiyadda, xitaa fikradaha dhallaanka.
Laakiin waa website kale oo loo baahan yahay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan uurka? Waxaan u maleyneynaa sidaas! Mid ka mid ah, xisaabiyaha toddobaadka ee uurka ayaa kaa caawin doona xisaabinta taariikhdaada la filayo. Waxaa suurtagal ah in aad su'aal ka qabtid su'aalahan ugu horeeya: Waa maxay dhammaan astaamaha uurka todobaadkii? Waa maxay goor hore Calaamadaha digniinta uurka? Sidee baan ku ogaanayaa haddii aan uur leeyahay, ama uur leedahay imtixaan sax ah, ama sida loo doorto iyo dhakhtarka dhalmada. Waxaa laga yaabaa inaad qabtid su'aalo ku saabsan STD-yada iyo uurka ama jimicsiga inta aad uurka leedahay. Waa maxay kala-soocayaasha kala duwan, iyo astaamaha uurka todobaadkii marxal kasta. Waxaa laga yaabaa inaad ka fekereyso naas-nuujinta, caanaha ilmaha, iwm. Marka la eego toddobaadka toddobaadka uurka iyo macluumaadka kale ee boggayaga, Uurka ee Toddobaadka, waxaan rabnaa in aan ka jawaabno su'aalahan iyo qaar kale oo badan! Waxaanu dabooli doonaa uurkaaga wakhti xaadirkan, caadiyan ku salaysan, inta lagu jiro usbuuca uurkaaga asbuucii, saddexda bilood ee ugu dambeyn saddexda bilood. Xitaa waxaanu ku dabooli karnaa horay macluumaadka iyo talooyinka uurka ka hor, waxyaabo ay tahay in la tixgeliyo intaanad uur qaadin. Waxaanu tallaabo tallaabo dheeraad ah ka qaadannaa, ka doodista dhalitaanka iyo kor u qaadida ilmaha caafimaad qabta dunida maanta. Horumarinta joogtada ah, xisaabiyaha toddobaadka ee uurka wuxuu ku siin doonaa macluumaad sax ah. Waxaad awoodi doontaa inaad raadiso taariikhda xilliga ugu dambeeya iyo sidoo kale taariikhda fikraddaada. Xitaa waxaa jiri doona habab aad u sareeya si loo xisaabiyo calaamadaha uurkaaga asbuucii.
Sida aan ku soo sheegnay waxaan ku dari doonaa posts si joogto ah oo ku saabsan wax soo gadashada ilmaha, diiwaanka hadiyadda, xitaa fikradaha ilmaha qubeyska. Joogso! Waxba isbarbar dhigo mucjisada iyo sixirka uurka. waa fursadaada inaad ku lug lahaatid geeddi-socodka hal-abuurka ee ugu weyn nolosha. Qorsheynta hore ee waayo-aragnimadani waxay hagaajin kartaa fursadahaaga kuugu fiicnaanaya adiga iyo ilmaha. Waxay ku caawin kartaa in la aqoonsado ama xitaa laga yareeyo calaamadaha uurka. Noloshadaada ayaa saameyneysa caafimaadka cunuggaaga, hase yeeshee waxay saameyn ku yeelan kartaa astaamaha toddobaadka asbuucii. Ka hor inta aanad qorsheynin toddobaadkaaga toddobaadkii, waxaad caymiskaaga iyo ilmahaaguba u muuqan kartaa waxyaabo fiican oo ka fogaan waxyaalaha waxyeelada leh inta aad uurka leedahay. Waqtiga ay haweenka badankoodu ogaadaan inay uur leeyihiin waxay u jiraan hal ilaa laba bilood uurka. Waqtiga ay dhakhtarkooda u arkaan, waxay yihiin laba ama seddex bilood oo isku xigta. Taasina waa sababta ay ula socdaan calaamadaha uurka toddobaadkii. Isbuucyada ugu horeeya 12 ee uurka waxay yihiin kuwo aad u muhiim ah, sababtoo ah tan ayaa ah marka ilmuhu yeesho nidaamyada unugyada waaweyn. Waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa dhici kara ka hor intaadan ogaanin uurkaaga ama u tag dhakhtarkaaga. Ahaanshaha qaabka uurka waxaa loola jeedaa diyaarinta jirka iyo maskaxda. Waxaad la kulmi doontaa isbeddel weyn inta lagu jiro xilliga uurkaaga. Haysashada caafimaad guud oo wanaagsan ka hor intaanay uurka leedahay waxay kaa caawin kartaa inaad wax ka qabato culeyska jirka iyo dareenka ee uurka, shaqada iyo dhalmada. Waxay kaa caawineysaa sidii aad u diyaargaroobi laheyd cunugga cusub ee dhasha. Waxaan kaa caawineynaa si loo ogaado calaamadaha uurkaaga isbuucii. Iyadoo loo marayo xisaabiyaha toddobaadka uurka iyo macluumaadka blogka ee la xidhiidha, si buuxda ayaa loo diyaarin doonaa.
Ka fiiri boggeena luuqado kala duwan, adigoo adeegsanaya navigation dhinaca midigta sare. Sidoo kale, fadlan si xor ah u faahfaahin toddobaadkaaga uurkaaga asbuucaga, calaamadaha, khibradaha, iwm.
Categories Select Category 12 Usbuucyada Uurka 16 Usbuucyada Calaamadaha Uurka 18 Usbuucyada Uurka 2 Usbuucyada Calaamadaha Uurka 8 Usbuucyada Calaamadaha Uurka Dhiigbaxa uurka Calaamadaha Hore ee Uurka Uurka Caafimaadka leh Uurka Molina Subaxnimada Sabtida Uurka Uurka Uurka Calaamadaha Uurka Fiidiyowyada Uurka Todobaadka Uurka Tubooyinka
Ma tihid dhakhaatiir iyo macluumaad ku saabsan boggani ma aha talo caafimaad. Waxaan sameynaa dadaalkeena ugu wanaagsan ee aan ku bixin karno macluumaadka saxda ah, laakiin kama dhigno damaanado. Waxaan kugula talinaynaa inaad raadsato talobixin caafimaad oo macquul ah dhakhtarka ama OBGYN.
Uurka ee Toddobaadka
Waad ku mahadsantahay inaad iska hubisid blogka Uurka ee Toddobaadka. Mawduuca goobta waa todobaadka uurka toddobaadka. Waxaan usbuuc usbuuc ku bixinnaa astaamaha uurka, iyo macluumaadka la xidhiidha, oo laga bilaabo uurka bilowga hore ee dhalmada.
Usbuuca Isbuuca Video 40
Usbuuca Isbuuca Video 39
Usbuuca Isbuuca Video 38
Usbuuca Isbuuca Video 37
Usbuuca Isbuuca Video 36
Xuquuqda daabacaadda Diidmo: Ma tihid dhakhaatiirta iyo macluumaadka ku yaal boggani ma aha talo caafimaad. Waxaan sameynaa dadaalkeena ugu wanaagsan ee aan ku bixin karno macluumaadka saxda ah, laakiin kama dhigno damaanado. Waxaan kugula talinaynaa inaad raadsato talobixin caafimaad oo macquul ah dhakhtarka ama OBGYN.